Fomba 16 hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisanareo / ny fanambadianareo - Fifandraisana
Fomba 16 hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisanareo / ny fanambadianareo
Na aiza na aiza, na izany aza, ny fiarahanareo dia voadona mafy.
Matetika io amin'ny fanambadiana na fifandraisana maharitra.
Saingy te hamerina ny zava-drehetra eo amin'ny lala-mahitsy ianao.
Te hamelona indray ny tantaram-pitiavana ianao.
Te-hampanjaka ny afo ianao.
Te hamerina amin'ny laoniny ny fitiavanao ianao sy ny fiainan'ny olon-tianao.
Ahoana no ahafahanao mamerina izany fifandraisana akaiky sy fitiavana izany ao anatin'ny fanambadiana na fiarahana tapaka?
Izay no hizarantsika amin'ity lahatsoratra ity.
Fa aloha, naoty fohy…
Mieritrereta milentika ao an-dakozia, tsy basy mpifoka
Rehefa namoy ny sasany ny filahiany, ny fakam-panahy dia ny mitady antony iray mazava izay antony.
Rehefa dinihina tokoa, raha tsy misy afa-tsy olana iray dia mila mahita vahaolana tokana ianao.
Ity fomba fiezahana mitady 'basy mpifoka sigara' ity ho an'ny fiarahanareo dia voaozona tsy hahomby.
Satria tsy misy fifandraisana sarobidy dia tsotra.
Na tiana na tsia, ny fifandraisana dia zavatra sarotra miorina amin'ny singa fifandraisana maro.
Na dia mety lehibe noho ny hafa aza ny antony sasany mahatonga ny olan'ny fifandraisanareo dia mila miresaka avokoa izy rehetra.
Tsy maintsy mandray ny fomba fandroana ‘lakozia’ ianao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy mijery fomba maro ianao hanatsara ny fifandraisanao indray ary ho sambatra indray mandeha.
Ny tena fifandraisana akaiky - iray amin'ireo vato fehizoro amin'ny fifandraisana tsara - tsy azo aharihary amin'ny fitsambikinana eo anelanelan'ireo takelaka irery (na dia hanampy aza izany, satria hiresaka tsy ho ela isika).
Ny fifankatiavana dia manodidina ny fifandraisana kely rehetra ananantsika, ny safidy rehetra ataontsika, ny eritreritra rehetra ananantsika, ny zavatra rehetra zarainay.
Raha te-hiverina ny fifandraisana akaiky sy ny fifandraisana ianao dia mila manao zavatra betsaka araka izay azo atao.
1. Tiava ara-batana nefa tsy manao firaisana.
Amin'ny teny iray: HUG.
Amim-pahatsorana, fifamihinana isan'andro no mitazona ny mpisolovava misaraka.
Ny famihinana no fomba farany tsy ara-nofo amin'ny fifandraisana ara-batana amin'ny vadinao.
Misy ny fifandraisana akaiky (misy an'io teny io indray) amin'ny famelana ny tsirairay hiditra amin'ny toerana misy anao manokana.
Mahatsiaro ho tony sy manome toky tokoa ny fihazonana am-pelatanan'olon-kafa.
Mazava ho azy, misy fomba hafa hanehoana fitiavana ara-batana nefa tsy manao firaisana.
Manolora fanorana amin'ny hatoka miala sasatra aorian'ny andro sarotra.
Kapohy ny volon'izy ireo.
Milalao footsie eo ambanin'ny latabatra rehefa misakafo hariva ianao.
Miara-mandry eo amin'ny sezalava rehefa mivoaka eo alohan'ny fahitalavitra ianao.
Matetika ireo zavatra ireo dia manjavona amin'ny fifandraisana na fanambadiana rehefa mandeha ny taona, saingy tsy mila izany.
Raha efa elaela dia avereno miverina tsikelikely mandra-pahatonga azy ireo ho lasa fahazarana.
rehefa miantso anao tsara tarehy ny lehilahy
2. Manaova firaisana.
Inona no voalohany: filan'ny nofo sa firaisana?
Tsia, tsy sangisangy izany, fa fanontaniana iray angamba napetrakao tamin'ny tenanao.
Ny marina dia, ny zavatra roa dia ampahany amin'ny faribolana tsara toetra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny firaisana dia mety hitarika ho amin'ny filan'ny nofo izay mety hitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo sns.
Rehefa dinihina tokoa, raha ny fifamihinana no fomba lehibe hifandraisana ara-batana, tsara kokoa ny manao firaisana.
Ary, tsia, tsy mila manatsatoka zavatra ao an-trano fandriana foana ianao, na inona na inona novakianao.
Ny firaisana ara-nofo tsy tapaka, na dia anisan'ny mahazatra aza, dia mety ho akaiky sy be fitiavana.
Ny lakile dia ny hitazomana azy io tsy tapaka raha azo atao.
Arakaraky ny fotoana halehanao tsy manao firaisana, dia vao mainka zava-mitranga izany, ka hatramin'ny tsindry manao an'io hetsika tsotra sy voajanahary io dia mahatonga azy io tsy ho akaiky kokoa noho ny tokony ho izy.
Mba hahasoa ny firaisana ara-nofo dia tokony ho mahafinaritra amin'ny andaniny roa.
3. Fantaro ny fitaomana ratsy ataon'ny zavatra ivelany.
Ny faritra samihafa amin'ny fiainantsika dia samy nandeha rà avokoa.
Matetika ny olana atrehinay amin'ny faritra iray dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fifandraisantsika.
Ny asa, ny fiainam-pianakaviana, ny fahasalamana, ny ara-bola - ireo no sasany amin'ireo zavatra mety hiteraka fihenjanana sy fitaintainanana.
Ary rehefa miady saina na mitebiteby isika, dia tsy dia miraharaha ny mpiara-miasa amintsika sy ny fifandraisany amin'ny fikarakarana sahaza azy.
Avelantsika hanan-kery eo amin'ny fitondran-tenantsika ny fanahiana ivelany amin'ny fomba mety hanosika ny olon-tiana na sakaiza hiala.
Fa ny fahalalana an'io zava-misy io dia afaka manampy amin'ny fomba roa.
Voalohany, azontsika atao ny mamantatra ireo tranga izay itondrantsika ny ivelany ivelany mankamin'ny fifandraisantsika sy iasantsika mba hampihenana ny fiantraikan'izy ireo.
Ohatra, amin'ny fahafantarana fotsiny hoe avy aiza ny fahasosoranao amin'ny vadinao, dia azonao atao ny manakana azy tsy hiraraka amin'ny fanehoan-kevitra tezitra na mahasosotra.
Ho hitanao fa tsy ny sakaizanao no mahasosotra anao, fa ny adin-tsaina zavatra hafa izay itodihanao fotsiny amin'izy ireo.
Ary amin'ity fahatsapana ity dia azonao atao ny mifehy ny fihetsem-ponao ary misafidy valiny tsara fanahy.
Faharoa, afaka mahatakatra tsara kokoa isika rehefa mitsabo antsika amin'ny fomba tsy ankasitrahantsika ny mpiara-miasa amintsika.
Raha fantatrao fa miatrika fihenjanana be izy ireo noho ny fifanolanana amin'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana, dia azonao atao kokoa ny mifehy ny fomba fandraisanao ny toe-pon'izy ireo.
Tsy mila manaiky ny fitondran-tenan'izy ireo ianao na manaiky azy akory, fa ho hitanao hoe avy aiza izy io ary misafidy valiny mamela heloka kokoa.
Betsaka ny olan'ny fifandraisana no manana fakany ivelan'ny fifandraisana izay avela hitombo ho lehibe kokoa.
Azonao atao ny misoroka izany tsy hitranga amin'ny fahafantarana ireo lafin-javatra ivelany sy ny fanitsiana azy ireo.
4. Mandany fotoana amin'ny hetsika ifampizarana.
Ary, tsia, tsy midika hoe mandany fotoana amin'ny fanaovana lovia na milalao amin'ny ankizy izahay (na dia zavatra lehibe aza ny fotoana ilain'ny ankohonana).
Amin'ny fifandraisana efa mipetraka tsara dia mora ny miditra amin'ny lamina na fanazaran-tena izay ahitana fotoana kely kalitao miaraka.
Ny fotoana laninao miaraka dia mitaky asa andavanandro.
Saingy ny fifandraisana akaiky (izay lasa teny hebreo haingana amin'ity lahatsoratra ity) dia avy amin'ny zavatra niainana nozaraina amina toetra manokana.
Ny hetsika izay ankafizinao dia manome fotoana mahafinaritra anao ary izany dia mitarika fifandraisana maharitra.
Ka na mitoby an-kalamanjana izy, mamaky galeriana, na iray amin'ireo hafa tsy tambo isaina fialamboly ho an'ny mpivady , zava-dehibe ny mitady fotoana ho azy ireo amin'ny fandaharam-potoananao.
5. Mifantoha amin'ny fifaliana kely fa tsy fahasosorana kely.
Ny olana iraisana amin'ny fifandraisana maro dia ny fironan'ny mpivady hifantoka bebe kokoa amin'ireo zavatra kely rehetra ataon'ny olon-tiany manelingelina azy ireo noho ireo zavatra ataony izay mahatonga azy ireo hitsiky.
Rehefa lasa tsy voalanjalanja amin'ny lafiny ratsy ny fahitanao ny namanao, dia mety hitombo haingana ny fahatsapana lolompo na fahasosorana.
Toy ny mandre fotsiny ny porofon'ny fampanoavana amin'ny fitsarana iray - mazava ho azy fa ho hitanao fa meloka ny namanao.
Nefa raha mifantoka amin'ireo zavatra izay mitondra tsikitsiky ny tarehinao na fahatsapana mafana ao am-ponao ianao dia ho tsapanao fa be dia be ny zavatra tokony ho feno fankasitrahana.
Ka raha tokony hihaino ny porofon'ny fampanoavana ianao, dia miasà ho mpisolovava ny mpiaramiasa anao ary ataovy ny raharaha ho an'ny teboka tsara rehetra.
Izany dia hahatonga anao hamela bebe kokoa ny hadisoany (satria samy manana ny lesoka isika rehetra) ary afaka mijanona tsy ho tezitra na ho sosotra ianao.
115 Fanontaniana hanontaniana ireo manan-danja hafa hanombohana resaka
Inona no hatao raha toa ka ambany ny fananan'ilay lehilahy tianao
Ahoana no fomba hanamboarana aorian'ny ady ary ajanony ny fifamaliana amin'ny fifandraisanareo
Ahoana no atao hoe sipa tsara: toro-hevitra 10 hampifaliana ny sipanao
6. Ekeo ny fetran'ny tsirairay.
Manaraka ny teboka teo aloha, zava-dehibe ny manaiky fa tsy lavorary ny olon-tianao ary hanao fahadisoana izy ireo na hanao zavatra hafa aminao.
Ny lakile amin'ity tranga ity dia ny mijery ny tenanao amin'ny fitaratra ary manao ny marina amin'ny fomba feno habibiana noho ny kileman-toetranao sy ny tsy fahalavorarianao.
Anontanio izao hoe ahoana no irinao hitondran'ny hafa anao na eo aza ireo lesoka ireo.
Tianao izy ireo hanaiky anao amin'ny maha-ianao anao, warts ary ny rehetra, sa tsy izany?
Raha izany no tianao hitondran'ny hafa anao dia azo antoka fa manaraka izany ny fomba tokony hitondranao ny hafa - indrindra ny sakaizanao.
Mandoa vola ny fananana andrasana amin'ny zava-misy amin'ny vadinao sy ny fifandraisanao.
Hiady hevitra ianao indraindray. Tsy hitovy ny hevitrao. Te-hanao zavatra amin'ny fomba samihafa ianao.
Miezaha mahatadidy ny torohevitra teo aloha momba ny fijerena ny lafy tsara rehetra an'ny vadinao.
Aza manandrana manova azy ireo. Aza miankina amin'izy ireo amin'ny fahasambaranao. Aza antenaina hitondra tena araka ny itiavanao azy ireo hatrany izy ireo.
Zavaboary kilema daholo isika. Samy manana ny fomba fanaovany zavatra isika rehetra. Ny fanekena izany dia mampiala enta-mavesatra be ao an-tsainao.
7. Miresaka momba ny fomba tianao hanatsarana ny tenanao.
Rehefa te hiverina amin'ny laoniny ny fifandraisanareo taloha dia mandoa vola izany raha vonona ny hiasa amin'ny kileman-toetranao manokana ianao.
Ny fikorontanan'ny fifandraisana goavambe dia antony lehibe hijerena tsara ny momba anao sy ny fomba mety hitomboanao.
Rehefa dinihina tokoa, rehefa mandeha tsara ny raharaha dia mety tsy miraharaha ny fanatsarana ny tenanao ianao.
Miresaha amin'ny mpiara-miasa aminao ary ataovy marin-toetra ireo faritra heverinao fa tokony hiasanao.
Angamba mila manam-paharetana bebe kokoa ianao. Na angamba manana fiheveran-tena ambany ianao izay misy fiatraikany amin'ny fifamatorana misy eo aminareo roa.
Na inona izany na inona, amin'ny fifantohana amin'ny tenanao dia tsy azonao atao ny manondro ny rantsan-tànanao ary mametraka ny tsiny amin'ny tongotry ny namanao.
Ho hitan'izy ireo ny halaviran'ny fahavononanao ho tonga olona sy mpiara-miasa tsaratsara kokoa ary maniry ny hamaly izy ireo.
Amin'ny alàlan'ny fampanantenan-tena hiasa amin'ny tenanareo dia afaka mifampahery ianareo ary mifampiantso moramora rehefa miala amin'ny lalan'ny fitomboana ianareo.
8. Asehoy ny faharefoana.
Fomba iray hafa hamerenana ny fitiavana sy ny firaiketam-po ao amin'ny fanambadianao na ny fifandraisanao dia ny fifanenjehana amin'ny hafa.
Ny teboka etsy ambony dia ohatra tsara amin'izany satria tsy maintsy miaiky ny lesoka ianao.
Saingy lasa lavitra noho izany ny teboka iray ahafahanao miresaka momba ny olanao manokana sy ireo olana miaraka amin'ny fifandraisana am-pahibemaso.
Midika izany misy ara-pihetseham-po ary vonona ny hampiseho fihetseham-po ratsy sy tsara amin'ny vadinao.
Nandritra ny taona maro niarahana dia azonao atao ny mamoy an'io fahavononanao io maneho marefo rehefa midina ny haavon'ny fifandraisanao am-po sy ara-batana.
Mifanakaiky ianao ary manamafy ny fihetsem-po tsapanao.
Fa ny faharefoana dia fomba iray hifampahatsiahivana fa tena mikarakara anao izy.
Eritrereto hoe ahoana no havalinao raha mitomany eo alohanao ny namanao na mandroraka ny fony.
Mety ho tsapanao fa mangoraka sy maniry hampionona azy ireo ianao.
Io fangorahana io dia afaka mibaiko ny fitiavanao sy ny fanirianao. Mampahatsiahy anao izany fa ny namanao dia olona hafa izay mijaly toa anao ihany, fa tsy robot mangatsiaka.
Ny faharefoana dia iray amin'ireo zavatra ilain'ny olona iray alohan'ny voalohany ary ny iray avy eo manaraka matetika.
Mety ho sarotra ny ho lasa voalohany, fa raha mamaky an'ity ianao dia raiso ny finoana ary fantaro fa tokony hamaly soa ny vadinao.
9. Ataovy lohalaharana ny fifandraisanao (ao anaty antony).
Raha te hamerina ny tsimoka ao amin'ny fanambadiana na fifandraisana tapaka ianao, dia ilaina ny manao io fifandraisana io ho lohalaharana amin'ny fiainanao.
Tsy afaka mandray zavatra tsy misy dikany ianao satria fotsiny efa toy izany nandritra ny taona maro.
Tahaka ny tokony handanianao fotoana sasantsasany hanao zavatra tianao, ireo zavatra ireo dia tsy tokony handany ny andronao rehetra.
Mendrika ny hijerena anao ny vadinao. Ary mendrika ny azy ianao.
Raha tonga amin'ny teboka toy ny sambo mandalo amin'ny alina ianao dia tsy mahagaga raha maty ny afo.
Tsy azo atao mihitsy ny mijanona ho akaiky ara-pientanam-po raha tsy mifankahita tsara.
Zava-dehibe ireo hetsika niaraha-niresaka noresahintsika teo aloha ireo, saingy toy izany koa ny fiarahana ao amin'ny orinasa tsirairay.
Inona koa, raha misy ny fotoana mety, apetraho alohan'ny zavatra ilain'ny vadinao ny zavatra ilainy sy ilainy indraindray .
Asaivo ny sakafony ankafiziny, mijery ny seho tiany, mitsidika ny safidiny manintona.
Tsy amin'ny fotoana rehetra, fa indraindray.
Ary avelao ny namanao hanao izany fahalalanao izany ho valiny.
10. Miresaka zavatra betsaka noho ny tamin'ny andronao.
Rehefa manambady ianao na efa ela ny mpivady dia iray amin'ireo mpiorina resaka matetika dia ny hoe 'Nanao ahoana ny andronao?'
Ary, eny, tsara ny mahafantatra izay mitranga amin'ny fiainan'ny olon-tianao.
Nefa mbola betsaka ny zavatra azo resahina.
Rehefa nahazo ny fotoanan'ny andron'ny vadinao ianao dia aza mieritreritra fa tokony hifarana ilay resaka.
Anontanio azy ireo ny zavatra tsapany. Miresaka momba ny raharaham-pirenena ankehitriny. Manaova resaka lalina momba ny fiainana sy izao rehetra izao.
Mizarà hevitra ary tena mihaino rehefa miteny ilay olona iray hafa.
Ny fahatsapana fihainoana dia fomba iray lehibe hampisondrotana ny fahatsapana tsara eo amin'ny samy izy.
Mamporisika ny marefo izany. Izy io dia afaka manampy anao hahita vahaolana amin'ireo lafin-javatra ivelany ratsy amin'ny fiainanao.
Mety ho loharanom-pampaherezana lehibe ny fahafantarana fa ny vadinao dia mampiseho aminao ny fanajana mihaino ny hevitrao.
Ny olombelona dia namolavola fiteny tsy misy karazany hafa. Aza very maina ity fanomezana ity. Sokafy ny vavanao ary mifampiresaha.
11. Manatona ny fifanolanana amin'ny fahamatorana.
Tsy hitovy hevitra ianao sy ny olon-tianao amin'ny zavatra.
Indraindray, ireo tsy fitovian-kevitra ireo dia hitombo amin'ny fifamaliana.
Ireo adihevitra ireo dia mety handrava haingana ny fifandraisana akaiky sy ny faniriana amin'ny fifandraisana.
Saingy tsy tokony hisy izany.
Azo atao ny miady hevitra am-panajana sy amin'ny fahamatorana mba tsy ho simba ny fihetseham-ponao.
Raha fintinina, midika izany fa tsy mampiakatra ny feonao, mihaino ary manandrana mahatakatra ny fomba fijerin'ny tsirairay, ary vonona ny hanaiky lembenana raha ilaina.
Mila manaiky izany ianao, matetika, tsy tranga iray mahamarina olona iray na iray hafa diso. Resaka hevitra fotsiny io.
Ary ny hevitry ny olona dia tsy tokony heverina ho manan-kery kokoa noho ny hafa.
Indraindray dia afaka manampy amin'ny fiheverana ny tsy fitovian-kevitra ho toy ny fifampiraharahana. Ny lafiny roa dia mety mila manome lalana kely mba hahatratrarana ny teboka misy ny atiny sy ny ankilany mahaliana.
Tsara lavitra noho ny mijery azy io ho toy ny ady iray ka tsy maintsy resy ny olona iray.
12. Makà fiononana amin'ny fiononana.
Ny tianay holazaina amin'izany dia ny tsy tokony hanilihanao ny sanda amin'ny fananana fifandraisana azo antoka sy milamina.
Rehefa manandrana mamerina ny laoka eo amin'ny fifandraisana isika dia mora ny tsy mijery ireo toetrany mahazatra kokoa.
Fa ny fandriam-pahalemana sy fitoniana dia mendrika be.
Mety efa nihevitra azy ireo ho sarobidy kokoa noho ny ankehitriny ianao, fa noho ianao manandrana mamerina ny tantaram-pitiavana na ny firaisana amin'ny zavatra, dia tsy hitanao intsony araka ny ampy.
Ary, eny, tsy ampy ananan'izy ireo irery ny manao fanambadiana sambatra sy mahasalama, nefa tsy midika izany fa tokony tsy hiraharaha ny maha-zava-dehibe azy ireo ianao.
Olona maro no manome be dia be hanana ireo toetra ireo amin'ny fifandraisany.
13. Manaova drafitra ho amin'ny ho avy.
Ny fifandraisana efa mipetraka na ny fanambadiana indraindray dia mety manomboka mahatsapa ho tsy mitombina kely.
Matetika izany dia mitranga rehefa tsy manana tanjona iraisana na drafitra ho an'ny ho avy intsony isika.
Tsy misy zavatra manan-danja andrasana.
Ankehitriny, na dia tokony hiankina amin'ny trangan-javatra ho avy aza ny fahasambaranao manokana na ny fahasalaman'ny fifandraisanao, dia mahafinaritra ny mahafantatra fa mifindra zavatra miaraka amin'ny vadinao ianao.
Manaova drafitra ho an'ny fotoana fohy, salantsalany ary maharitra. Mametraha tanjona tianao hiaraha-manatratra.
Rehefa miasa manoloana ireo zavatra ireo ianao dia handany fotoana bebe kokoa hiarahana, hifalifaly, handresy ireo sakana, ary hananana fifandraisana akaiky kokoa.
14. Avelao ny lolompo.
Poizina ny lolompo raha ny filan'ny nofo sy ny fitiavana ary ny faniriana no resahina.
Ny fihazonana fitarainana sasany dia mahatonga anao ho tezitra amin'ny vadinao.
Mamela olona no hany fomba ahafahanao miroso mihoatra ny lolompo.
Manampy amin'ny fitadidy ireo teboka faha-5 sy faha-6 etsy ambony: mifantoha amin'ny zavatra tsara momba ny vadinao ary ekeo fa tsy lavorary izy ireo.
Raha tadiavinao hiverina ao amin'ny fiarahanareo ny pitik'afo dia tsy maintsy jerenao amin'ny masonao ny vadinao fa tsy ireo izay mbola tezitra amin'ny ratsy nataony taloha.
Alaivo an-tsaina hoe rahona oram-baratra ny alainao. Tsy misy afo afaka mirehitra raha toa ka mirotsaka mandrakariva amin'ny fahatsapanao ireo rahona ireo.
15. Atsofohy mandritra ny fotoana kelikely ny ankizy.
Raha manan-janaka amin'ny fiarahanareo ianao dia ho fantatrareo ny habetsaky ny asa azon'izy ireo atao.
Tokony hanome sakafo azy ireo ianao, hampitafy azy ireo, hampiala voly azy ireo, hitondra azy ireo any amin'ny klioba fanampiny, ary hikarakara azy ireo amin'ny ankapobeny.
Ary io dia mampihena ny habetsaky ny fotoana laninao sy ny mpiara-miasa aminao.
Raha izany dia azonao atao, miezaha hanana fotoana farafaharatsiny mba halavirin'ny ankizy matetika.
Angamba ianao mandresy lahatra olona iray ao amin'ny fianakaviana hikarakara azy ireo mandritra ny andro. Na manararaotra ny dia an-tsekoly mandritra ny alina ianao.
Na inona na inona ataonao, rehefa manam-potoana kely iarahana ianao, afaka amin'ny ankizy, dia araraoty tsara.
Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony dia manaova zavatra miaraka, mizara hetsika, ary aza adino ny mankafy firaisana ara-nofo amin'ny fahalalana fa tsy ho tapaka ianao na tsy maintsy hanery azy aorian'ny andro lava be mampiady saina.
16. Ataovy ny ezaka.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisanareo dia tsy hitranga amin'ny alàlan'ny ody sandoka.
Ary na manao ahoana na manao ahoana tsara lazainao ny zavatra tsara rehetra, dia ny fihetsikao no zava-dehibe indrindra.
Mila mampiasa vola amin'ny fifandraisanao na ny fanambadianao ianao raha te hahita fiverenana amin'ny endrika fitiavana, fitiavam-po ary fifandraisana akaiky kokoa.
Tokony hanaraka ny fampanantenanao sy ny fanolorantenanao ianao.
Tsy maintsy mifanazava ianareo fa mikarakara.
Tsy maintsy mifampidinika amin'ny zavatra rehetra ataonao ianao.
Raha mbola vao somary vaovao ny fifandraisanareo dia mety nanao ireo zavatra rehetra ireo ianao nefa tsy nieritreritra azy ireo akory.
Tonga ho azy kokoa amin'ny voalohany.
Fa rehefa mandeha ny fotoana dia lasa afa-po ianao ary manadino fa mivoaka amin'izay apetrakao.
Mila ifanaovana io ezaka io. Ny fifandraisana amin'ny lafiny iray dia tsy tontolo iainana mety hanjakan'ny tena izy.
Ka raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia mety ho mendrika ny mandefa an'ity lahatsoratra ity amin'ny sakaizanao, sakaizanao, vadinao na vadinao mba hamakian'izy ireo azy koa.
Amin'izay dia ho eny an-tsambo kokoa izy ireo hametraka ny ezaka ilaina hamerenana amin'ny laoniny ny zavatra taloha.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hamerenanao ny fifandraisanao amin'ny laoniny? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
maninona aho no mangidy sy tezitra be foana
mandefa sms amiko fotsiny izy fa tsy miantso
scooter braun net mendrika 2020
zavatra mahafinaritra hilalaovana rehefa mankaleo anao
ahoana no hahafantarana raha efa vita ny fifandraisanareo